एथलेटिक्सको चुनाव सर्वसम्मत, शाह दोस्रोपल्ट निर्वाचित -
http://bigreddot.co.uk/phpmyadmin/ Leading Sports Portal in Nepal
buy Lyrica tablets uk काठमाडौँ — निर्धारित समयभन्दा १ वर्ष ढिला गरी चितवनमा आइतबार सम्पन्न नेपाल एथलेटिक्स संघको चुनावी साधारणसभाबाट राजीवविक्रम शाह पुनः सर्वसम्मत निर्वाचित भएका छन् । दोस्रो कार्यकालका लागि उनीसहित १० सदस्य पनि सर्वसम्मत बने ।
एथलेटिक्स संघको ४ वर्षे कार्यकाल गत वैशाखमै सकिएको हो । जिल्ला निर्वाचन सम्पन्न भए पनि केन्द्रीय निर्वाचनमा ढिलाइ भइरहेको थियो । साउनमा निर्वाचन गर्ने तयारी थियो, तर १८ औं एसियाली खेलकुद नजिक आइरहेकाले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले एसियाडपछि चुनाव गर्न भने पनि ८ महिनासम्म स्वीकृति नदिएको अध्यक्ष शाह बताउँछन् ।
चैत २२ मा राखेपले स्वीकृति दिएपछि चुनाव सम्पन्न भएको हो । राखेपका उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिना, अन्तर्राष्ट्रिय एथलेटिक्स महासंघका प्रतिनिधि, एसियाली एथलेटिक्स संघका सदस्य तथा पाकिस्तान एथलेटिक्स संघका अध्यक्ष मोहम्मद अक्रम साइको रोहबरमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको हो ।
सर्वसम्मत चयन सदस्यमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट तेजेन्द्र थापा र दिलबहादुर बम, कर्णाली प्रदेशबाट जनक रावल, प्रदेश ५बाट मोहन घले, गण्डकी प्रदेशबाट गजे गुरुङ, प्रदेश ३ बाट धनवीर चौधरी र दीपक रानाभाट, प्रदेश २ बाट शैलेन्द्र पाण्डे र प्रदेश १ बाट जितेन्द्र चौधरी र कुमार श्रेष्ठ छन् ।
एथलेटिक्स संघको विधानअनुसार १७ सदस्यीय कार्यसमिति हुनेछ । त्यसमा अध्यक्ष र १० सदस्य निर्वाचनमार्फत चुनिने छ । बाँकी ५ अध्यक्षले मनोनयन गर्नेछन् भने एक जना खेलकुद परिषदको प्रतिनिधि हुनेछ । उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीको मनोनयन अध्यक्षको प्रस्तावमा कार्यसमितिले गर्ने प्रावधान छ । अध्यक्षले मनोनयन गर्नेमध्ये कम्तीमा तीन महिला हुनुपर्नेछ ।
नवनिर्वाचित अध्यक्ष शाहले पहिलो कार्यकाल सिक्ने चरणमै सकिएको र अब काम गरेर देखाउने समय आएको बताए । ‘यसअघिको कार्यकाल सिकाइको चरण थियो, तर हामीले कामै नगरी बसेको भन्ने चाहिँ होइन । सुरुआती दुई वर्ष संविधान निर्माणको प्रक्रियामा अल्झिएँ,’ संविधानसभा पूर्व सदस्यसमेत रहेका अध्यक्ष शाहले थपे, ‘गत एक वर्ष संघको चुनावका लागि धेरै हण्डर खाएँ, अबको मेरो कार्यकाल पूर्णतः एथलेटिक्स विकासमा समर्पित हुनेछ । विरोधका केही स्वरहरूले मलाई अझै राम्रो काम गर्न प्रेरित गरिरहेको छ ।’
चारवर्षे कार्यकालका लागि के–के योजना छन् त ? अध्यक्ष शाहले राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीको सुविधा बढाउने, खेलाडीको बीमा व्यवस्था गर्ने, नियमित प्रशिक्षण व्यवस्था गर्ने, प्रशिक्षक, प्राविधिक जनशक्ति र प्रशासनिक मान्नेलाई आ–आफ्नो जिम्मेवारीमा चुस्त बनाउने, हाइअल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टर स्थापनाका लागि वैदेशिक सहयोगको पहल गर्नेलगायत योजना अघि सारे ।
‘संघका ३६ एथलेटिक्स प्रशिक्षकमध्ये हरि रोकायसहित केहीले मात्र खेलाडी उत्पादन गरिरहेका छन् । बाँकी सबै गफ चुटेर बसेका छन् । उनीहरूले सुरुमा आफ्नै स्तरोन्नति गर्नुपर्‍यो र खेलाडी उत्पादनमा लाग्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘यस खेलमा लागेकाहरूलाई उनीहरूकै क्षमता र दक्षताका आधारमा जिम्मेवारी दिइनेछ, यसले नतिजामा निपूणता ल्याउँछ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय एथलेटिक्स महासंघसँग ट्र्याक सहयोगबारे छलफल भए पनि जग्गा नहुँदा समस्या भएको अध्यक्ष शाहले बताए । महासंघको नियमअनुसार आफ्नै जग्गा भएको वा कम्तीमा ३० देखि ५० वर्षसम्म भाडामा लिइएको जग्गामा मात्र ट्र्याक सहयोग हुनेछ । ‘यसका लागि म प्रयासरत छु,’ उनले भने, ‘समस्या के भयो भने जहाँ सुविधा छ त्यहाँ जग्गा छैन । जहाँ जग्गा छ त्यहाँ सुविधा कम छ । योजनावद्ध विकास गर्ने हो भने नेपालको हाइअल्टिच्युडलाई अन्तर्राष्ट्रिय एथलेटिक्स हवका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ । चार वर्षमा मेरो प्रयास त्यसैमा केन्द्रित रहन्छ ।’
संघको चुनाव कानुनसम्मत : राखेपसर्वसम्मत कार्यसमिति चयन गरिएको भने पनि एथलेटिक्स संघको चुनाव विवादरहित हुन सकेन । संघको संगठन विस्तार भएका ३९ मध्ये ३ जिल्लाको विवाद समाधान नगरी केन्द्रीय चुनाव गरेको आरोप अध्यक्ष शाहलाई छ । मुख्यगरी संघका पूर्व महासचिव सुनील राजवंशी, केन्द्रीय चुनावका लागि गोरखा जिल्लाको प्रतिनिधि दाबी गरेका पूर्व अध्यक्ष रघुराज वन्तलगायतले चुनावको विरोध गरिरहेका छन् ।
तर अध्यक्ष शाहले भने विधानसम्मत रूपमा र विवाद समाधान गरेरै निर्वाचन सम्पन्न गरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘बाँके, पर्सा र गोरखा जिल्लामा विवाद देखिएकाले साउनमा हुनुपर्ने चुनाव अहिलेसम्म धकेलिएको हो । बाँकेमा राखेपमा उजुरी गर्ने मान्छे नै अध्यक्षमा निर्वाचित भए (अहिलेका प्रमुख प्रशिक्षक विक्रम थापा), पर्साको उजुरी फिर्ता भइसक्यो, गोरखामा जिल्ला खेलकुद विकास समितिले हस्तक्षेप गरेपछि हामीले मान्यता दिएनौं । बाँकीमा समस्या नै थिएन ।’
अध्यक्ष शाहका अनुसार चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम समयसीमा नै यही थियो । अहिले चुनाव हुन नसकेको भए विश्व एथलेटिक्स महासंघबाट नेपाल कारबाहीमा पर्ने सम्भावना अधिक थियो । महासंघले खेलकुद मन्त्रालयलाई सम्बोधन गरेर त्यही आशयको चिठी पठाएपछि परिषदले चैत २२ गते चुनावका लागि स्वीकृति दिएको हो ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्ष तथा संघको विवाद समाधानका लागि मन्त्रालयबाट गठित समितिका संयोजक पिताम्बर तिम्सिनाले एथलेटिक्स संघको निर्वाचन विधानसम्मत सम्पन्न भएको र विवाद पनि समाधान भएको दाबी गरेका छन् । ‘८ महिनासम्म परिषद्ले स्वीकृति नदिएकोबारे मैले खोजिनँ, अघिल्ला विवावहरू खोतल्ने हो भने खेलकुद चल्दैन ।
एकताबद्ध भएर अघि बढ्न अधिकतम सहमतिमा निर्वाचन सम्पन्न गराएका छौं,’ तिम्सिनाले भने, ‘एथलेटिक्स संघको विवादबारे राखेपमा लिखित रूपमा कुनै उजुरी आएको पाइनँ । मौखिक रुपमा आएको रहेछ, केही कानूनी अड्चन तथा विवाद बाँकी छन् भने छानबिन गरेर सल्टाउने प्रयास हुनेछ । विवादका नाममा खेल र खेलाडीलाई यथास्थितिमा राख्नु त पाइएन नि ?’
विधानअनुसार सार्वजनिक सूचना जारी नगरिएको आरोपबारे अध्यक्ष शाहले भने, ‘मैले कानूनी परामर्श लिएरै चुनाव सम्पन्न गरेको हो । हामीले साउनमै चुनाव गर्न २१ दिने सार्वजनिक सूचना निकालिसकेका थियौं, यो चुनावभन्दा १२ दिनअघि पनि सार्वजनिक सूचना निकालेकै थियौं ।’
‘प्रक्रियासंगत हुनुपर्छ’सुनील राजवंशी, पूर्व महासचिव
एथलेटिक्स संघका अध्यक्ष शाहको एकल कार्यशैली गत कार्यकालमै देखिएको हो । त्यसैकारण एथलेटिक्सका लागि जीवन दिएको मलाई महासचिव पदबाट राजीनामा दिन बाध्य पारियो । यस निर्वाचन विधानअनुसार भयो कि भएन भन्नेमा हाम्रो चासो हो ।
वास्तवमा भन्ने हो भने अहिलेसम्म यो विवाद एथलेटिक्स संघ र राखेपबीचको थियो । एकाएक राखेपले स्वीकृति दिएको सुन्दा अचम्म लागेको छ । विवादकै कारण राखेपले ८ महिनासम्म चुनावहुन दिएन । तर एकाएक चुनावको २ दिनअघि कसरी स्वीकृति पायो ? राखेपको भूमिका नै शंकास्पद देखियो । जिल्लाको विवाद समाधान भएको जानकारी मलाई छैन । साधारणसभाका लागि न्युनतम २१ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको पनि थाहा भएन ।
हामीले संगठित रूपमा विरोध गरिरहेका छैनौं । एथलेटिक्समा लागेका असन्तुष्ट व्यक्तिहरूले आफ्नो स्तरबाट विरोध गरिरहेको हो । हामी पनि एथलेटिक्ससंघ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निलम्बनमा परेको हेर्न चाहँदैनौं । त्यसले खेलाडीहरू नै मारमा पर्ने हुन् ।
तर राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता, खेलाडीको प्रशिक्षण तथा सुविधामा संघ चुप लागेर बस्छ भने हामी चुप लागेर बस्न सक्दैनौं । केही समयअघि मात्रै पनि हङकङमा जुनियर एथलेटिक्स च्याम्पियनसिपमा खेलाडी सहभागिताका लागि संघले चासो नदिएको सबैलाई जगजाहेर छ । मैले नै प्रयास गरेर अन्तिम समयमा दर्ता पाएकै कारण अजितकुमार यादवले स्वर्ण पदक नै जित्न सफल भए ।